Plugin AMP miaraka amin'ny Google Analytics - MG
Plugin AMP miaraka amin'i Google Analytics
Ny mpanova HTML-to-AMPHTML sy ny plugins AMPHTML dia mampiditra ho azy ireo kaody fanaraha-maso Google Analytics ao amin'ny pejy Google AMP. Na ny fanaraha-maso kaonty marobe aza dia tohana!
Ampidiro ny tag <amp-analytic>
Ny Accelerated Mobile Pages Generator dia mamantatra avy hatrany raha misy kaody fanarahana Google Analytics napetraka ao amin'ny tranokalanao manokana ary mamaky ilay ID fanarahana Google Analytics mifanaraka amin'izany, izany hoe ny laharana UA .
Ny generator AMPHTML dia manaiky ihany koa ny mety fampiasana isa UA marobe , toy ny ampiasaina, ohatra, amin'ny 'Multiple Account Tracking' . Ny mpamorona an-tserasera AMP dia mamadika ho azy ny marika Google Analytics UA ho lasa tag 'amp analytics' ary koa mampihetsika ny fanarahana ny Google Analytics teo aloha tamin'ny pejy AMP!
Miaraka amin'ity karazana fampidirana Google Analytics ity dia miseho ao amin'ny kaontinao Google Analytics (!) Ny angon-drakitra fanaraha-maso rehetra momba ny pejy AMP, noho izany dia hanohy handray ireo angon-drakitra fanarahana ny AMP rehetra voangona amin'ny toerana mahazatra ianao!
Ny mpiorina an-tserasera AMP dia manohana ireto kinova Google Analytics manaraka ireto:
Any amin'ny firenena sasany (ohatra: any Alemana) dia misy fepetra hafa tsy maintsy fenoina hahafahana mampiasa Google Analytics mifanaraka amin'ny lalàna momba ny fiarovana ny angon-drakitra: Ny fampiasana ny anarana IP. Noho io antony io, ny Accelerated Mobile Pages Generator dia manohana ny asan'ny Google Analytics 'anonymizeip' ary mametraka ny octet farany adiresy IPv4 na 80 faramparany adiresy IPv6 ho aotra alohan'ny hitahirizany ny angon-drakitra mpampiasa. Midika izany fa ny adiresy IP feno dia tsy voasoratra velively amin'ny kapila mafy an'ny mpizara Google Analytics!
Ny fanaingoana Google Analytics IP dia tsy ampiasain'ny mpiorina Accelerated Mobile Pages, fa sehatra mahazatra an'ny tag 'amp-analytics' avy amin'ny rakitra ofisialy AMPHTML .
Ny data amin'ny tag 'amp-analytics' dia ampitaina amin'ny fomba tsy fantatra anarana amin'ny ankapobeny!
Fampahalalana momba ny fiarovana angona Google Analytics ho an'ny tranokala AMP
Mba hampiasana ny fanarahana mandeha ho azy ny fanarahana ny Google Analytics ho fanajana ny lalàna momba ny fiarovana ny angon-drakitra, dia mila fanamarihana mazava amin'ny fanambarana fiarovana ny tranokalanao izany!
Ao amin'ireo pejy AMP novokarina izay azo idirana amin'ny alàlan'ny amp-cloud.de, isaky ny faran'ny pejy AMP, dia resahina ny fanambarana fiarovana ny data amp-cloud.de, izay misy ny fampahalalana momba ny fiarovana angona ilaina amin'ny fanarahan-dia an'i Google Analytics .
Na izany aza, raha mampiasa iray amin'ireo plugins AMP amp-cloud ianao dia mila mampiditra fanamarihana amin'ny fanarahana ny Google Analytics amin'ny fampahalalana momba ny fiarovana ny data ao amin'ny tranonkalanao!
amp-cloud.de dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fandikan-dalàna. Tsy maintsy jerenao ary hizaha ny tenanao raha toa ka miorina amin'ny fomba azo antoka ara-dalàna ny kaonty Google Analytics anao sy ny pejy AMP! (Teny lakile: fifanarahana Google Analytics amin'ny fikarakarana angon-drakitra araka ny § 11 BDSG ).